Izindleko ezingezona ezejwayelekile ngokuvumelana namazinga okusebenza - Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Okungekho Standard Standard Bearings Ngokusho kwamazinga okusebenza
Ukufakwa okungekho okujwayelekile okufakwayo kulungile, okuphazamisa ukunemba, impilo, ukusebenza. Ngakho-ke, umnyango wokwakha kanye nomhlangano wokufakelwa okungeyona ejwayelekile kufanele ufundwe ngokugcwele. Ithemba lokulandela amazinga okusebenza ukufaka. Izinto ezijwayelekile zokusebenza zivame kanje:
(1), ukuhlanza ama-bearings angavamile kanye nezingxenye ezingezona ezijwayelekile ezithintekayo
(2), hlola usayizi wezingxenye ezixhunyiwe nokuqedela
(4), emva kokufakwa kwebhethri engavamile emva kokuhlolwa
(5), ukunikezwa kokugcoba
Ithemba lokufaka ukukhiqiza okungezona okujwayelekile ngaphambi kokuba kulungele ukufakwa. Ukugcoba ukugcoba okujwayelekile, akukho ukuhlanza, ukugcwalisa ngokuqondile amagesi. Ukucwiliswa kwamafutha okugcoba, okuvamile futhi akudingeki ukuba uhlanze, kodwa insimbi noma izindoli eziphakeme kakhulu ezingejwayelekile, njll, ukusebenzisa amafutha ahlanzekile ukuze ususe ama-bearings angenalutho kwi-anti-rust agent. Susa i-anti-rust agent ye-bearings ejwayelekile, elula ukugqwala, ngakho-ke ayikwazi ukunakwa. Ngaphezu kwalokho, ukubheja okungekho okujwayelekile okushicilelwe ngamafutha akuhlanjululwa ngokuqondile.
Indlela yokufakelwa engavamile, ngenxa yesakhiwo esingajwayelekile, lapho izimo zihluka, ngokujwayelekile, ukuzungeza okuningi kwe-shaft, ngakho-ke indandatho yangaphakathi idinga ukuphazamiseka okufanelekile. Ama-bearings angavamile, ama-press-press press press, noma izindlela eziningi ezishisayo zokushisa. Umgodi we-Taper, ukhonjiwe ngqo kwi-shaft ye-taper, noma nge-sleeve.
Kufakwe kugobolondo, imvume evamile engaphezu kwendandatho yangaphandle nenani lokuphazanyiswa, ngokuvamile ucindezela umshini, noma kukhona ukupholisa emva kokufakwa kwamakhaza abambezelayo ngendlela. Njengoba iqhwa elomile lipholile, kubanda kukhishwa ukufakwa kwaleso senzakalo, umoya uzolinganisela emanzini ebusweni bezintambo ezingajwayelekile. Ngakho-ke, isidingo sezinyathelo ezifanele zokulwa nokugqwala.
1, susa okokuqala amasondo, khumbula ukuthatha izikrini, ulahlekelwe enkingeni.
2, susa amabhethri angajwayelekile. Amanye amasondo omgogodla aqinile kakhulu, ama-bearings angekho ajwayelekile ukususa, nge-wrench engxenyeni (okungukuthi, enye yezikrini) ukuwugubha kanzima, uqiniseke ukuthi ukubheja okungelona okujwayelekile akulula ukubi!
3, okokuqala ngebhobho lokuzinyo kuyoba yizinto ezingcolile ezixubhayo, awukwenzi lesi sinyathelo futhi, akubi!
I-Deep Groove Ball Bearings Emkhawulweni we-Speed ​​Speed